Isibukeli se-ExplorIR®-W CO2 - I-Electronic Components Distributor - Components-Store.com
Ikhaya > Imikhiqizo emisha kakhulu > Isibukeli se-ExplorIR®-W CO2
Isibukeli se-ExplorIR®-W CO2
I-GSS 'ExplorIR-W CO2 sensor ilungele izinhlelo zebhethri-amandla, kufaka phakathi izinhlelo zokusebenza eziphathekayo, ezigqoka, nezizenzekelayo
I-Gas Sensing Solutions 'ExplorIR-W iyinamandla emandla, aphansi CO2 inzwa nge-analog (voltage) okukhiphayo. Inzwa yakhelwe ngokulinganisa isilinganiso se-CO2 amazinga ezindaweni ezinzima. Lokhu kuhlanganisa izinhlelo zokusebenza ezivezwe ezinkampanini ezicindezelayo nezimo eziphakeme zokudlidliza.
Imfuneko yayo yamandla aphansi yenza kube kuhle kumasistimu ane-battery-powered, kufaka phakathi izinhlelo zokusebenza eziphathekayo, ezigqokekayo nezizimele. I-ExplorIR-W CO2 inzwa yakhiwe besebenzisa ipulatifomu ye-LED yobuchwepheshe obunikazi obunikazi obuhlukile kanye nemiklamo ye-optical evela ku-GSS. Yilobu buchwepheshe obuqinile obunikeza amandla okusebenzisa okungcono kakhulu, isikhathi sokuphila, nokuqina ekilasini lakhe.
I-ExplorIR-W itholakala ngezigaba zokulinganisa 0 kuya ku-20% ukuhlushwa. Inzwa ifaneleka ekulawuleni inqubo nezinhlelo ezifisa ukufana. Ingasetshenziselwa izinhlelo zokusebenza zebhethri lapho kudingwa khona amandla aphansi aphansi. Lokhu kufaka izicelo ze-IOT, njengezingubo zokugqoka.
Uhlobo lwenzwa yegesi: i-carbon dioxide (CO2)
Isikhathi sokuqala: 1.2 amasekhondi
Izimo zokusebenza (izinga lokushisa): 0 & deg; C kuya ku-50 & deg; C
Izimo zokusebenza (umswakama): 0 kuya ku-95% RH, okungenayo ukukhanda
Indlela yokuzwa: ukuxilisa okuqinile okungekho-dispersive i-infrared (NDIR), i-LED ene-patented solid state state and detector, i-optics yegolide ene-patented
Uhla lokulinganisa: 0 kuya ku-20%
Uhlu lokucindezela ukusebenza: 500 mbar kuya ku-10 ibha
Isikhathi sokuphendula (ukushintshwa kwesinyathelo esigabeni segesi): amasekhondi angu-10 kuya kumaminithi amabili
Ukufakwa kwamandla: 3.25 V kuya ku-5.5 V (3.3 V Kunconyiwe)
I-Peak yamanje: 33 mA
Isilinganiso samanje: <1.5 mA
Ukusetshenziswa kwamandla: 3.5 mW
Ukuphila:> iminyaka engu-15
Ukuxhumana: UART ne-voltage output
Ukuvimbelwa nokushaqeka ukumelana
Umbuso oqinile: ayikho izingxenye ezihambayo, azikho izinsimbi ezifudumele
Ukusetshenziswa kwamandla / amandla aphansi: 3.5 mW
> Iminyaka engu-15 yokuphila
Idijithali (i-UART) noma ukukhiqizwa kwe-analog (voltage)
Eziqinile futhi ezihlukahlukene
Ethembekile ezindaweni ezinzima, eziyinkimbinkimbi
Kuhle kakhulu kumandla aphansi namasebetri
Kufika ku-50x amandla aphansi kune-NDIR CO ejwayelekile2 izinzwa
Ukuphila isikhathi eside, ukugcinwa okuphansi
Kufaneleka ngezinhlelo ezingenazintambo, eziphathekayo, ezigqoka, nezizimele
Ihlanganiswa namanethiwekhi angenantambo we-TT njenge-Zigbee & reg ;, i-Wi-Fi, i-LoRa, i-Bluetooth, i-SigFox ne-EnOcean
Isitoreji sokudla / ukuhamba
I-EXPLORIR-WV-20 I-ROBUST & LOW POWER CO2 SENSOR WI I-Carbon Dioxide (CO2) 500 mbar ~ 10 bar ± 5% 13 - Masinyane Buka imininingwane
I-EVKITEWV-20 UKUHLOLA KIT, ROBUST & LOW POW I-Carbon Dioxide (CO2) I-Analog ne-Digital 3.25V ~ 5.5V 10 - Masinyane Buka imininingwane